Winget, onye njikwa ngwugwu ohuru mepere emepe nke Microsoft | Site na Linux
Winget, njikwa ngwugwu ọhụụ mepere emepe nke Microsoft mepụtara
Ọchịchịrị | | Aplicaciones, Noticias
Microsoft enyela ọtụtụ ihe gbasara ọnwa a Ma ọ bụ na kemgbe nkwupụta nke onye isi ala nke Microsoft na nke o kwetara na ya ezighi ezi n'omume ya maka ngwanrọ na-emeghe, ndị Fans abụọ ahụ ejighi njikwa na echeghị echiche ha (ma ndị ọma ma ndị ọjọọ).
Ugbu a, na obere akụkọ na-adịbeghị anya, Microsoft emeela njem ọzọ nke mere ka ọtụtụ ndị chetụ echiche banyere mmekọrịta ya na isi mmalite. NA bụ na ndị mmepe wepụtara mbipụta nke izizi mbụ nke nwalee njikwa ngwugwu gị "Winget" (Windows Ihe ngwugwu Manager).
Ihe njikwa ngwugwu ọhụrụ a na-enye ngwaọrụ maka ịwụnye ngwa site na iji akara iwu (nke ndị ọrụ Linux ga-amata ozugbo) ebe ọ bụ na ọtụtụ nkesa Linux (maka ọtụtụ akụkụ) jiri ndị njikwa ngwugwu nke kama ịchọ ngwa na weebụ, budata onye nrụnye ma pịa ọkachamara, ọ nwere ike ịgba ọsọ iwu ngwa ngwa ịchọta ma wụnye ngwa site na aha.
1 Banyere Winget
2 Esi nwalee Winget?
N'oge a, akụrụngwa a maka ndị mmepe, Mana Microsoft maara na ndị mmepe nke atọ nwere ike ịmepụta otu ngwa ngwa eserese dị mfe nke na-achọta ma wụnye ngwa ngwa.
Kedu nke nwere ike ịdị ka Storelọ Ahịa Windows, mana ịnweta ụwa dum nke Windows desktop ngwa ọdịnala ndị mmadụ na-eji. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ọ dịka Chocolatey, mana etinyere n’ime ya na Windows.
Versiondị nke ugbu a na-akwado iwu maka
Gosi ihe ngwugwu
Hazie ebe nchekwa
Na-arụ ọrụ na hashes nke installer files
Nyochaa iguzosi ike n'ezi ihe nke metadata
Na nsụgharị ọzọ, a na-atụ anya iwepụ, ndepụta na iwu melite.
Akọwapụtara ngwugwu ngwugwu site na faịlụ nwere ihe ngosi na usoro YAML. A na-echekwa faịlụ ndị a na-arụ ọrụ ozugbo na sava ndị ọrụ ngo, ihe nchekwa ahụ na-arụ ọrụ dịka ndeksi yana ngosipụta na-ezo aka na faịlụ msi dị na mpụga (dịka ọmụmaatụ, anabatara na GitHub ma ọ bụ na weebụsaịtị ọrụ ahụ) ma jiri hash SHA256 iji chịkwaa iguzosi ike n'ezi ihe ma chebe megide adịgboroja.
A na-edepụta ụdị nke mbụ zuru ezu na Mee n'afọ ọzọ, ga-akwado mwekota na Microsoft Store katalọgụ, ndenye autocomplete, dị iche iche version edemede (nsụgharị, beta nsụgharị), echichi nke usoro mmiri na ngwa maka akara obubọk, optimizations iji nyefee nnukwu faịlụ (delta-updates ), ngwugwu ngwugwu, interface maka imepụta ihe ngosi, na-arụ ọrụ na ịdabere na ya, faịlụ ntinye na zip zip (na mgbakwunye msi), wdg.
Njikwa ngwugwu winget dị maka ndị ọrụ nke ụdị nyocha ọhụụ kachasị nke Windows Insider ma ga-ebufe dị ka akụkụ nke Desktọpụ Ngwa Installer 1.0.
Ugbu a, ọrụ dị ka 7Zip, OpenJDK, iTunes, Chrome, Blender, DockerDesktop, Dropbox, Evernote, FreeCAD, GIMP, Git, Maxima, Inkscape, Nmap, Firefox, Thunderbird, Skype, Edge, VisualStudio, KiCad ka etinyelarị na ebe nchekwa, LibreOffice, Minecraft, Opera, Putty, TelegramDesktop, Steam, WhatsApp, Wireguard na Wireshark, yana kwa ọtụtụ ngwa Microsoft, dị maka ntinye site na njikwa ngwugwu a.
Edere koodu Winget na C ++ ma kesaa ya n'okpuru ikike MIT. Ejiri ngwugwu sitere na nchekwa nchekwa obodo. N'adịghị ka ịwụnye mmemme sitere na katalọgụ Windows Store, winget na-enye gị ohere ịwụnye ngwa na enweghị ahịa na-enweghị isi, onyonyo, na mgbasa ozi.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ya, ị nwere ike ịlele nkọwa Na njikọ na-esonụ.
Esi nwalee Winget?
Ole ndị ka ha bụ Ndị ọrụ Windows Insider”Ma nwee mmasị na njikwa ngwugwu a, Ha nwere ike ịdebanye aha maka Windows Package Manager Insiders Program jiri otu adreesị ozi-e Microsoft akaụntụ ahụ ị na-eji na Insider Mee.
Ozugbo akwadoro, Storelọ Ahịa Microsoft ga-emelite ngwungwu App Installer na Windows 10 Insider Mee ma ị ga-enwe ohere ịnweta iwu nku na PowerShell.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Winget, njikwa ngwugwu ọhụụ mepere emepe nke Microsoft mepụtara
Winget dị ka ihe dị mma ijikwa kọmputa nkeonwe, mana ọ gaghị adị mma ijikwa kọmpụta ụlọ ọrụ.
WAPT kacha mma dabara adaba na ụlọ ọrụ.
Microsoft gbanwere obere (agbanyeghị na ọ “na - akwado” sọftụwia na - akwụghị ụgwọ):
BIAS: mmegide Bluetooth nke na-enye ohere ịme ihe na ngwaọrụ abụọ
Veloren: egwuregwu vidiyo na-emeghe emeghe nke Cube World dere